Dhakhtarkii Maraykanka U Fududeeyey Dilkii Usaama Bin Laden Oo La Maxkameynayo | Himilo Media Group
Dhakhtarkii Maraykanka U Fududeeyey Dilkii Usaama Bin Laden Oo La Maxkameynayo
Pakistan, 10 Oct, 2019 (Himilo)-Dr Afridi ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay Maxkamad ku taal dalka Pakistan ayaa lagu wadaa in ay billowdo dhageysiga racfaan la doonayo in xabsiga looga sii daayo dhakhtar ku eedeysan in Mareykanka uu ka caawiyey in uu dilo hoggaamiyihii Al-Qaacida Cusama Bin Laden.
Dhakhtarkaasi ayaan waligii si rasmi ah dacwad loogu soo oogin doorkii uu ku lahaa hawlgalkii sanadkii 2011-kii lagu bartilmaameedsaday Bin Laden oo ahaa ninka aadka uu Mareykanka u doondoodnayey.
Xadhigiisa ayaa waxa ka dhashay muran weyn oo sababay in Mareykanku uu kaalmadii dhaqaale ka jaro dalkaasi Pakistan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkii 2016 xilli uu ku jiray olalaha doorashada ballan qaaday in Dr Afridi la soo dayn doono laba daqiiqo gudahood haddii isaga la doorto, hase yeeshee taasi ayaanan wali dhicin.
Muddo 10 sano ah ayuu Bin laden dhuumaaleysanayey, In kastoo dhakhtarkaasi gudaha Mareykanka looga aqoonsan yahay halyey geesi ah, dadka reer Pakistan intooda badan waxay u arkaan khaa’in waji gebax ku riday dalkiisa. Ciidammada Mareykanka ayey u suurtagashay in ay yimaadaan gudaha dalka Pakistan oo ay dilaan Cusama Bin Laden oo waliba ay meydkiisa qaataan iyaga oo aan wax dhibaato ah arrintaasi kala kulmin.
Waxaa dilka Bin Laden ka dhashay su’aal ah millatariga dalkaasi Pakistan miyuu wax ka ogaa joogitaanka Bin Laden ee gudaha dalkaasi Pakistan.